We are ready for "THE OSCARS 2020" - II - | Kavyalaya - काव्यालय
We are ready for “THE OSCARS 2020” – II
by रितेश मंसिर ७, २०७६
‘टाइलर’ अरुले मारेको माछा, गंगटो चोरेर बजारमा बेच्ने हुन्छ किनभने ऊ सँग लाइसेन्स हुँदैन । एकदिन अरुले थाहा पाउँछन् र झगडा हुन्छ । टाइलर उनिहरुको डुङ्गा चोरेर भाग्छ ।
‘ज्याक’ डाउन सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त छ । ऊ रिटायर्मेन्ट होममा बस्ने हुन्छ । उसको सपना हो, रेस्लिङ स्कुलमा भर्ना हुने । एकदिन ठूलो रेस्लर बन्ने । ऊ आफ्नो सपना पूरा गर्न घरबाट भाग्छ ।
यसरी टाइलर र ज्याकको एउटै बाटोमा भेट हुन्छ । दुबैको पछि मान्छेहरु लागेका छन् । उनिहरुको खोजी तिब्र गतिमा सुरु हुन्छ ।
फिल्म हाँस्यरसले भरिपुर्ण छ । दुई जनाको एडभेन्चरमा तपाईंले आफुलाई पनि पाउनुहुनेछ । समय गएको पत्तै पाइदैन !
हरेक परिवारसँग कम्तिमा एउटा रहस्य हुन्छ ।
‘इसाबेल’ भारतमा एउटा अनाथालय संचालक गरेर बसेकी छिन् । उनको अनाथालयलाई न्यु योर्कको एउटा कम्पनीले चन्दा दिने निर्णय गर्छन् । त्यसका लागि इसाबेल स्वयंम न्यु योर्क जानुपर्ने हुन्छ ।
त्यहाँ पुगे पछि भनेको समयमै उनको काम बन्दैन । एक्कासि बीस वर्ष अघिको बिगत उनको सन्मुख खडा भै’दिन्छ । रहस्यहरु फुस्किदै जान्छन् । तपाईंलाई कस्सिदै लैजान्छ ।
उनले थाहा पाउँछिन्, उनलाई चन्दा लिन मात्रै बोलाइएको होइन भनेर । उनलाई न्यु योर्क बोलाउनुमा कसैको स्वार्थ लुकेको हुन्छ ।
फिल्म इमोस्नल छ । सुन्दर छ । मजेदार छ । अभिनयहरु चुम्बक जस्ता छन् । फिल्मले तपाईंलाई मज्जाले छुन्छ ।
सोचे जस्तो कहिले पो हुन्छ र ? कहिलेकाहीँ त्यस्तोलाई पनि अंगाल्नुपर्छ जसलाई जिन्दगीभर घृणा गरिरहन्छौं ।
‘Timothee’ को ‘कल मि बाइ योर नेम’ कसले नहेरेको होला र ! म फ्यान भएको हुँ यहीँ फिल्मबाट उसको । हुन त उसलाई मैले ‘लेडिबर्ड’ मा पनि झुलुक्क देखेको थिएँ !
‘द किङ्ग’ बेलायतका ‘राजा हेनरी पाँचौं’को जिवनमा आधारित छ । उसलाई राजकाज मन पर्दैन । राजनिती मन पर्दैन । युद्ध मन पर्दैन त्यसले ऊ दरबार बाहिर बस्छ आफ्नो केही साथीहरूसँग ।
रोगले उसको बुबा ‘राजा हेनरी चौथो’लाई लिएर जान्छ । भाइ ‘थोमस’ पनि युद्धमा मारिन्छ । नचहादा-नचाहदै पनि ऊ सिंहासनमा बस्नुपर्छ । सधैं दरबारको राजनिती, कुटनिती मन नपराउने ऊ कसरी यसमा बिस्तारै फस्दै जान्छ ?
‘Timothee’ को परिपक्क अभिनयले दिवाना बनाइदिन्छ ।
“Dolemite is my name, and fucking up motherfucker is my game.”
Rudy Ray Moore लाई धेरैले चिन्छन् । उनलाई ‘Rap’को गडफादर भनेर पनि चिनिन्छ । उनैको जिवनमा आधारित छ यो फिल्म ।
उनी रेकर्ड स्टोरमा काम गर्ने हुन्छ । उसको पनि सपना छ, आफ्नो गित रेडियो स्टेसनमा बजाउने । एकदिन उसले भेटेको एकजना मान्छेबाट ऊ प्रभावित हुन्छ र आफैं क्लबमा कमेडी गर्न थाल्छ, गाउन थाल्छ, राइमिङ गर्न थाल्छ ।
बिस्तारै उसका साथीहरू ऊ सँग मिसिदै जान्छन् । सबैको साथ पाउदै जान्छन् । एल्बम निकाल्छन् । नाम, दाम दुबै कमाउछन् । दुनियाँ सामु उनलाई आफ्नो आवाज मात्रै होइन ऊ आफैंलाई पुर्याउन चहान्छ ।
बिस्तारै ऊ फिल्मी दुनियाँतिर लाग्छ । Moore भएर खेलेका Eddie खुबै जचेका / जमेका छन् । एउटा कलाकरको उतारचढाब रसाइलो तरिकाले देखाइएको छ ।
हिम्मतको कथा भन्दा फरक पर्दैन ‘ओफिसियल सिक्रेटलाई’ !
‘ब्रीटिस इन्टिजेन्स् ‘का एजेन्ट ‘क्याथरिन गन’ को जिवनमा आधारित किताब ‘The Spy who tried to stopawar’मा आधारित छ फिल्म ।
एकदिन अफिसमा ‘गन’ले एउटा मेसेज प्रप्त गर्छन् । उनी चकिन / अचम्मित हुन्छिन् । तीन देश जोडिएको त्यो भित्रि जानकारीलाई उसले हिम्मतका साथ लिक गरिदिन्छिन् । सम्भावित युद्धलाई रोक्न आफ्नै देशको विरोधी हुन्छिन् ।
जनता र सरकार दुईभागमा बाँडिन्छन् । यसरी उनको पारिवारिक सम्बन्धलाई पनि प्रश्न लगाइन्छ ।
फिल्म कसिलो छ । बिलिभ मि, मज्जाले कस्छ ।
तपाईं प्रेम र सपना बिच कुन रोच्नुहुन्छ ?
‘जुलि’को सपना छ, फिल्म बनाउने । उनी आफ्ना केही साथीहरूसँग अपार्टमेन्ट सेयर गरेर बस्छिन् । एकदिन उनले एन्थोनीलाई भेट्छिन् ।
साथीहरुले अपार्टमेन्ट छाडेपछी एन्थोनी जुलिसँगै बस्न थाल्छन् । जुलिको सपनालाई साथ दिन्छन् । जुलि नियमित फिल्म स्कुलमा गैरहने हुन्छिन् ।
एकदिन एन्थोनी पेरिस जान्छन् । पेरिसबाट फर्केपछि उनमा केही परिवर्तन आउँछ । जुलिले बिस्तारै एन्थोनीको रहस्य थाहा पाउदै जान्छिन् । तर, पनि जुलिले उनलाई माया गरिरहन्छिन् । सहयोग गरिरहन्छिन् ।
एन्थोनीमा आएको परिवर्तनले दुईबिचको सम्बन्धलाई कहाँ पुर्याउँछ ? सपनालाई कहाँ डोर्याउँछ ।